Blọọgụ abụghị Ọgbakọ - Na-eme ka ha bụrụ Nnukwu Ngwaọrụ Ahịa | Martech Zone
Blọọgụ abụghị Ọgbakọ - Na-eme ka ha bụrụ Nnukwu Akaụntụ Ahịa
Saturday, October 27, 2007 Tuzdee, Machị 27, 2012 Douglas Karr
Nchegbu mgbe niile a na-eweta mgbe ị na-atụle ịde blọgụ ụlọ ọrụ dịka atụmatụ azụmahịa bụ ụjọ ndị ahịa na-ekwupụta mkpesa ha. Mgbe ajụrụ ajụjụ a na klaasị m mere n'izu gara aga, echefuru m isi ihe m na-ekwukarị. Na isi nke a bụ ihe dị iche na etiti na blog.
Kedu ihe dị iche na Blog na ọgbakọ?
Ndị mmadụ na-aga blọgụ azụmahịa iji wulite ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ mgbe ha na-eme mmekọrịta na blogger.
Ndị mmadụ na-aga ọgbakọ azụmahịa iji chọọ enyemaka ma ọ bụ nye aka.
Na blọọgụ, onye na - ede blọgụ na - emepe, na - eduga ma na - eme ka mkparịta ụka ahụ. Na otu nzukọ, onye ọ bụla nwere ike.
N'ọgbakọ, ọ na-abụkarị ndị ọbịa inyere ibe ha aka. Na blọọgụ, nke ahụ adịkarịghị. Ọzọkwa, onye na-ede blọgụ na-eme mkparịta ụka ahụ.
Forumlọ ọrụ nwere ike ịbụ ihe a na-emeghe iji sonye. Otu blog nwere ike ịnwekwu nchịkwa na ikwu okwu oke na ọbụna ike ịza ajụjụ ọ bụla.
Ndị na-agụ blọọgụ na-ewulite mmekọrịta na blogger ma nwee ike ịnakwere na ịgbachitere mkpebi ha. Nzukọ ọgbakọ bụ obere ebe enwere ohere maka ndị ọbịa nwere ike ibute ụlọ ọrụ karịa ya.
Nke a bụ Nzukọ
Kedu oge ikpeazụ ị banyere saịtị ma chọta 'Nzukọ Ndị Ahịa' ebe ị nwere ike iwepụ nkụda mmụọ gị na ụlọ ọrụ? Ọ bụchaghị ọtụtụ ebe ahụ? Nope… ị ga-enwe nsogbu ịchọta otu.
A na-eji ọtụtụ forums maka azụmahịa iji belata ụgwọ nkwado site na ikwe ka ndị ọrụ nyere ndị ọrụ ndị ọzọ aka. Nzukọ mmemme na-adị mma maka nke a, ana m akwado ndị mmadụ ka ha jiri nke a dị ka atụmatụ iji belata ụgwọ nkwado. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere API, ị ga-ahụ ụwa nke ndị enyi dị njikere inyere gị aka na nzukọ ha!
A pụkwara iji ọgbakọ, karịsịa na ogo, rịọ nzaghachi na nke kacha mma / kachasị njọ ụlọ ọrụ ga-enye na-enweghị ịhapụ nsogbu niile na ikwe ka ndị mmadụ tie mkpu ma tie mkpu. Nzukọ nwere ike ịbụ nyocha na nzaghachi… bara uru karịa nyocha naanị.
Gaghị ahụ ka a na-etinye ha n'ọrụ ndị ahịa, n'agbanyeghị. N’ikwu eziokwu, ọ ga-abụ ntakịrị ihe ihere, ọ bụghị ya? Nwere ike ichetụ n'echiche ebe ị ga - eziga otu ụlọ ọrụ si gbue ya ugboro ugboro? All ụlọ ọrụ falter ma ọ bụ ida n'otu oge ma ọ bụ ọzọ…. itinye ya na ebe nchekwa maka ụwa ịhụ nwere ike ọ gaghị abụ atụmatụ kacha mma!
Maka mkpesa ndị ahịa na-eme, ụdị kọntaktị mara mma na-arụ ọrụ kacha mma. Mgbe ndị ahịa na-ewute anyị, ha na-enwe obi ụtọ ịpụpụ na, oge ụfọdụ, ha nwere ike imebiga ihe oke na enweghị isi na mmetụta na azụmaahịa ha. Idebe ọgbakọ abụghị ezigbo echiche… mana ikwe ka ụzọ dị mfe maka ndị na-akwado gị iji aka gị zaghachi onye ahịa iwe dị oke ọnụ.
Nke a bụ Blog
Ihe kachasị dị iche n'etiti omume na blog bụ na mkparịta ụka nzukọ (nke a makwaara dị ka 'eri') malitere site na onye ọbịa. Nzukọ na-enwekarị ndị isi na - enweghị isi - ndị a bụ n'ezie ndị na - enye iwu nke nlebara anya ma ọ bụ na - eduzi mkparịta ụka nke nzukọ, mana ha nwere ike ọ gaghị abụ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ. A blog nwere onye ndu iwu, onye edemede nke post.
Mkparịta ụka nke ọgbakọ na-amalite site na eri nke onye ọ bụla nwere ike ịmalite, dị ka ịkpọ oku maka enyemaka ma ọ bụ mkpesa. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ na-elekọta ọgbakọ ahụ ga-enyo enyo na mkparịta ụka ahụ ma ọ nweghị ohere iji duru mkparịta ụka ahụ. Ha na-akpaghị aka na agbachitere, n'agbanyeghị isiokwu. Adịkarị m ahụla usoro mkparịta ụka ghọrọ mkpesa mkpesa maka blog belụsọ na onye na-ede blọgụ rịọrọ mkpesa ndị ahụ. Ọtụtụ mgbe, ahụla m nkọwa na-enwu ọkụ ngwa ngwa ndị ọzọ na-agụ blog 'wepụrụ' - ebe ha na-abụkarị ndị na-akwado azụmaahịa a.
Onye na-ede akwụkwọ ahụ mepụtara post blog. Maka blog ụlọ ọrụ, nke a bụ isi. Nwere ike mepee onwe gị maka nkatọ maka isiokwu isiokwu ahụ, mana uru ọ bụ bụ na ị ga-eji nwayọ na-eduzi mkparịta ụka ahụ. Ndị na-aza ajụjụ bụ ndị debanyere aha ndị bịara na blọọgụ gị ịchọ ihe ọmụma ma ọ bụ mmekọrịta gị na ha.
Ọ dị mkpa na ha abụọ dị iche maka omume na ebumnuche nke ndị ọbịa ha, yana ebumnuche maka ojiji ha! Ndị mmadụ anaghị eleta blog gị iji mee mkpesa, ha na-eleta iji mụta ihe. Na blọọgụ na-enye gị ụzọ dị mma iji wulite mmekọrịta gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị - jiri uru ya ị na-eme mkparịta ụka ahụ.
Tags: obere akpa dijitalụokwuugwo ugwona nso nso nkwukọrịtanfcihu peejiChọọ Marketingọsọ ọsọ
Ọkt 28, 2007 na 7:42 PM
Na-akpali. M na-eche ma ọ bụrụ na ị jidere post a, edere m ya n'izu ole na ole gara aga nke gbalịrị ịkọwa myirịta dị n'etiti blog na otu nnọkọ. http://www.jeffro2pt0.com/similarities-between-a-blog-and-forum/ Ihe kachasị dị iche n'etiti ha abụọ bụ na blog na-ekwupụta mkparịta ụka ahụ ebe otu nnọkọ na-enye ndị ọrụ ohere ịmalite mkparịta ụka nke ha.
Ọkt 29, 2007 na 7:51 AM
Emeghị m, Jeffro2pt0, kama ọ ga-abụrịrị na edeghachi ya. Ọmarịcha ọrụ na igosipụta ọdịiche anụ ahụ na myirịta!
(M n'azụ na ALL ịgụ m ugbu a !!!)
Ọkt 28, 2007 na 8:14 PM
Ezigbo ọkwa. O juru m anya na ole mgbe olile anya na-achọ ọgbakọ maka saịtị ha. Mgbe m gwuru miri, m na-ahụkarị na ha chọrọ ọtụtụ nzaghachi nke obodo na-achọghị n'ezie ide ọdịnaya.
Olileanya ha bụ na ndị ahịa ha na-arụ ọrụ niile. Nzaghachi gị masịrị m dị iche, mana ọ bụ nke nwere obi ike. Ọtụtụ, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ga-emeghachi omume na-adịghị mma n'echiche bụ na blọọgụ kwesịrị "ịchịkwa" mkparịta ụka. Onwe m, echere m na nke ahụ bụ isi. Enwere ike ịgụ blọọgụ karịa ọgbakọ n'ihi na ọ nweghị onye nwere ike iti mkpu ma ọ bụ kwusi mkparịta ụka na blọọgụ gị belụsọ ma ị hapụ ha.
Na ụlọ ọrụ, ọ dịghị ihe dị mkpa.